Indawo yokubuka izilwane ye-Pilanesberg - I-Sun City Resort
Indawo yokubuka izilwane ye-Pilanesberg
I-Pilanesberg National Park eduze neSun City resort eNyakatho yeNtshonalanga yeNingizimu Afrika, ihamba kahle nje ngehora elilodwa ukusuka eGoli.Ephakathi nendawo encane - engapheli ngokuphelele - i-volcanic crater, uPilanesberg ubusiswe ngokukhululeka ngokukhululeka. Ikhaya kuya ezinhlanu ezinhlanu, ukunikeza ama-antelope amahle kanye nezilwane ezincane kanye ne-malaria-mahhala, lokhu kuyindawo evelele kakhulu.
Izindawo zokuhlala zihlanganisa ama-catlets, ama-lodge amakhulu, amahhotela, nesitayela esisodwa esincane esisezingeni eliphezulu. Yiqiniso, izivakashi eziningi epaki zihlala eSun City eseduze. Kanye nokuhlola emotweni yabo, ungajoyina idrayivu yemidlalo ehlelekile, ukuhamba okuhambisiwe noma - into ethile ehlukile - yenza ukuhamba kwebhola lokushisa emoyeni epaki.
I-Pilanesberg National Park, ehlanganisa amahektha angaba ngu-55 000, yiyona enkulu kunazo zonke eningizimu ye-Afrika. Leli paki elingenayo i-malaria linamathele emagqumeni akhuphukile esakhiweni se-volcanic alkaline-enye yezinhlaka ezintathu kuphela zomhlaba.
I-Pilanesberg ikhona ngaphakathi kwendawo yokuguquka phakathi kweKalahari eyomile kanye nohlaza oluphansi lwe-Lowveld, okubizwa ngokuthi 'i-Bushveld'. Ngokungafani nanoma yiliphi elinye ipaki elikhulu, ukuqoqwa okuhlukile kwezidalwa ezincelisayo, izinyoni nezimila kwenzeka ngenxa yale ndawo yokuguqula. I-Springbok, i-Brown Hyena, i-Red-eyeed Bulbul, ne-Camelthorn imithi ngokuvamile etholakala ezindaweni ezimelele itholakala ehambisana ne-Impala, i-Eye-eyed Bulbul kanye neCape Chestnut.
Ama-hues anemibala, izindawo ezihlukahlukene kanye nama-panorama azothokoza futhi azithokozise abathwebuli bezithombe nabo bonke kodwa isivakashi esingenakubona. Ukushayela kwelanga ngaphambi kokuphuma kwelanga nokuhamba ngemva kokushona kwelanga kungenzeka ngenxa yezikhathi zokuvulwa / ukuvalwa kwesango.
Ngokwemvelo, indawo yasePilanesberg idume emhlabeni wonke. Isakhiwo sawo, okuthiwa 'iPilanesberg National Park Alkaline Ring Complex' sakhiwe ukuqhuma kwentaba-mlilo eminyakeni engaba ngu-1 200 million edlule. Ngaphandle kobukhulu bayo obuhlukile, uhlobo lomumo namadwala, imvelaphi ye-volcanic kanye nesimo sezulu esiphuthumayo se-crater esiqediwe kuye kwaholela ezinhlobonhlobo zemifino.
Lokhu kunikeza ezinye izindawo ezihle kakhulu eNingizimu Afrika. Ibuye inikeze izindawo eziningi ezihlala kuzo izilwane zemidlalo. Ngenxa yalokhu, i-Pilanesberg National Park inethuba lokuphatha izinhlobo ezihlukahlukene zezinhlobo zemidlalo kunanoma iyiphi enye indawo efana neyomdlalo we-game in Southern Africa.
Funda kabanzi mayelana ne-Safari Lodges ngaseSun City ePilanesberg National Park.